Tag: software dị ka ọrụ
Ịgụ Oge: 4 nkeji Oge agafeela mgbe ndị otu ahịa na-azụ ahịa na-ejighị oku na ndị ahịa na-akparaghị ókè rụọ ọrụ. Maka na ugbu a bụ oge iji belata obere ma nata karịa n'ihe gbasara mmeri ndị ahịa. Ihe niile ị chọrọ bụ ụfọdụ atụmatụ aghụghọ, yana ikekwe enyemaka sitere na ụlọ ọrụ mmepe ngwa SaaS. Mana, ọbụlagodi tupu nke ahụ, ihe niile na-agbadata ịmara ezigbo omume maka ọfụma ndị ahịa. Mana nke mbu, o doro gi anya na imara okwu a. Ka anyị
Ịgụ Oge: 6 nkeji Kedu nọmba gị lekwasịrị anya dị ka ụlọ ọrụ SaaS? Uto, n'ezie. Skyrocketing ịga nke ọma na-atụ anya n'aka gị. Ọ dị mkpa maka ndụ gị ogologo oge: Ọ bụrụgodi na ụlọ ọrụ sọftụwia na-eto eto na 60% kwa afọ, ohere ọ ga-abụ ibu ọtụtụ ijeri dollar adịghị mma karịa 50 / 50. McKinsey & Company, Too Fast or Die Slow Month over over month uto dị oke mkpa iji kpuchie ihe nfu site na ụlọ ọrụ SaaS na-ahụkarị. Iji merie atụmanya na
Ịgụ Oge: 2 nkeji Rivalfox na-anakọta data site na isi mmalite dị iche iche na ndị asọmpi gị wee mee ka data ahụ dị mfe site na otu ụlọ ọrụ data na-asọmpi. Isi mmalite gụnyere okporo ụzọ, ọchụchọ, weebụsaịtị, akwụkwọ akụkọ, pịa, mmekọrịta mmadụ na ibe ya na mmadụ na mgbanwe ọrụ. Rivalfox bụ azịza SaaS nke na-etinye ọgụgụ isi na-asọ mpi n'aka gị. Anyị kwenyere na site n'ịmụta n'aka ndị asọmpi gị, ị nwere ike ito eto ngwa ngwa, zere mmejọ ma nweta uru. Na Rivalfox, ụlọ ọrụ nha niile nwere ike
Ịgụ Oge: 4 nkeji Dịka ụlọ ọrụ na-akwado ndị ahịa anyị kpamkpam, anyị na-azụta nkwekọrịta maka ngwa na nyiwe dị ntakịrị iji kwado mbọ ndị ahịa anyị. Imirikiti mmekọrịta ndị ahụ na Software dị ka ndị na-ere ọrụ (SaaS) dị egwu - anyị nwere ike ịdebanye aha n'ịntanetị ma anyị nwere ike ịkagbu mgbe anyị mechara. Na afọ gara aga, agbanyeghị, anyị ewerela n'ụzọ nkịtị na nkwekọrịta ole na ole. N'ikpeazụ, ọ bụ mbipụta dị mma ma ọ bụ ire ahịa na-eduhie eduhie dugara
Ịgụ Oge: 2 nkeji Dị ka ndị na-ere ahịa, data jupụta anyị. Naanị ụnyaahụ, m na-emepe emepe ọganihu SEO nke wetara m site na nsuso ọkwa, data Webmasters, data Google Analytics na Hubspot iji tinye usoro dị mkpa na ịhazi akụkọ iji hụ na ọ ziri ezi. Nzuzo Azụmaahịa Nchọpụta (BI) anọwo na oghere Enterprise ruo nwa oge ma bụrụkarị ndị ahịa / ntinye ihe nkesa na ntinye ogologo oge… oge ụfọdụ. Ihe ngwọta BI ga-enyere m aka